Nezvesu - Boegger Industech Limite
Boegger yakanangidzirwa pakuruka mweya makore 15 muChina, mishes yose inobudiswa mukuwirirana neASTM nomupimo weIsO, kana zvinodikanwa zvako zvichida mapepa kana kuti mapuro, Boegger angagona kugovera waya yakakwirira zvikurusa nokuda kwavatengi namabasa, agamuchira zvinodikanwa zvako chaiwo, zvinodikanwa zvako chaidzo, Uye Boegger aigona nguva dzose kugadzira mifananidzo yako kana kuti kugadzirwa kwenguva nemhaka yepurogiramu yokugadzirwa kunochinja.
Boegger inobudisa zvikurukuru: chisimbi chisina simba chitsva chisviba, chiso chemvura chemvura, Siiling yesimbi yakaparadzwa, pepa resimbi rakawedzerwa, mvura yokushongedza nokuda kwokushonga kwamadziro okunze, girirazi rakanyorwa, kedai, Kereteni yemhosva yemvura, mvura yesimbi, rusvingo rwekheni, bhanda remhizha, keketa rokubatanidzwa, Keredi yesimbi, Zvakadaro, kugamuchira vatengi vatsva nevakare kubvunza pamusoro pomutengo wacho
Boegger iri kuomerera ku "ukoshi hwokusika nokuda kwavabvumi," mikoshi huru yokutendeseka, kushivirira, itsva, basa somudzimu webhizimisi, kuita ukoshi nokuda kwavakwanyina kupfurikidza nokuzvimirira nokubatira pamwe nomwoyo wose.
"Pakusika ukoshi nokuda kwavakwanyina."
Boegger nzvimbo yakaganhurirwa, kuti vatengi, vatengi, vagoverwi, vashandi, uye ukama hwavo vamene hwokubatira pamwe pakati pemunits nevanhu avo vari vabvumirana vavo, uye kupfurikidza bedzi nenhamburiko dzokugadzira ukoshi nokuda kwavakwanyina, kuti vawane ukoshi hwavo vamene nokuwana kukura nokubudirira.
"Kuvimbika, kushivirira, kutsva, basa"
Boegger haiganhurikidzwa. Kuti kutendeseka ndihwaro hwebatira pamwe kwose, kushivirira ndihwo hwokupedza zvinetso, kutsva chishandiso chokuita nemabasa uye basa rinokosha kuti riite ukoshi.